HTC မှ နေပြီး ယခုအသစ်ဖွင့်လှစ်မည့် အရောင်းဆိုင်များတွင် လာရောက်ဝယ်ယူသူများကို လက်ဆောင် ပစ္စည်းများပေးအပ်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့သိရ
HTC မှ နေပြီး ယခုအသစ်ဖွင့်လှစ်မည့် အရောင်းဆိုင်များတွင် လာရောက်ဝယ်ယူသူများကို လက်ဆောင် ပစ္စည်းများပေးအပ်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက HTC Myanmar မှာဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
At 1/15/2013 08:19:00 PM No comments:
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ပင်လောင်းမြို့က လိုဏ်ဂူတခုမှာ မူးယစ်ဆေး သန်း ၇၀၀ ဖိုးလောက် ဖမ်းမိတယ်လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောပါတယ်။ အဲဒီ လိုဏ်ဂူက စင်းတောင်းကျေးရွာ အုပ်စု၊ ထီတလိရွာနားမှာ တည်ရှိ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးသတင်းရရှိတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့မနက်မှာ လိုဏ်ဂူထဲ ၀င်စစ်တော့
- ဆာလာအိတ် ( ၆၃) အိတ်နဲ့ ထည့်ထားတဲ့ ဘိန်းစိမ်း ၉၁၂ ကီလို၊
At 1/15/2013 08:16:00 PM No comments:
At 1/15/2013 08:14:00 PM No comments:
At 1/15/2013 06:20:00 PM 1 comment:
စိုင်းနောင်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၅။
ကျွန်တော်နာမည် စိုင်းနောင်ပါ. ကချင်ပြည်နယ်မှာ မွေး. ကချင်ပြည်နယ်မှာ ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ ရှမ်းတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ရွာပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း ရှမ်းရွာတွေနဲ့ ရှမ်းလူမျိုးတွေ အများစု နေထိုင်ကြပြီး ကချင်လူမျိုးတွေက လူနည်းစုပါ။ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက အတူနေလာတော့ ကချင်ရယ် ရှမ်းရယ်ဆိုပြီး ခွဲခွဲခြားခြားမရှိပဲ အေးအတူပူအမျှ အတူနေလာခဲ့ကြတာ.. ဟိုး .ကျွန်တော်တို့ အဖေတို့ အမေတို့ ငယ်ငယ်ကတည်းကပါ။ ကျွန်တော် မှတ်မိရသလောက်ဆိုရင်
At 1/15/2013 04:56:00 PM No comments:
ဦူးသုမင်္ဂလ (ဒယ်အိုးဆရာတော်) ၏ တရားပွဲ ပြန်လည်ကျင်းပခွင့်ရ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားပွဲ ဟောပြောခွင့် ပိတ်ပင်ခြင်းခံထားရသည့် ဘဒ္ဒန္တဦူးသုမင်္ဂလ(ဒယ်အိုးဆရာတော်)၏ တရားပွဲများ ပြန် လည် ကျင်းပခွင့်ရရှိပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ပထမဆုံးတရားပြန်လည် ဟောပြောခွင့်ရရှိသည့် တရားပွဲအဖြစ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ခရိုင်လုံးဆိုင်ရာ ရွှေကျင်နိကာယ ၀ိနယ
ဓမ္မစာဖြေ စာပြန်ပွဲတော်ကြီး ဓမ္မသဘင်ကို ဇန်န၀ါရီလ ၂၉
At 1/15/2013 03:59:00 PM No comments:
အမျိုးသမီးဝန်ကြီး ၃ဝ ရာခိုင်နှုန်းရရေး ရခိုင်အမတ် လွှတ်တော်တွင် အဆိုတင်မည်
အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး စုစုပေါင်း၏ ၃ဝ ရာခိုင်နှုန်းသည် အမျိုးသမီးဖြစ်စေရေးအတွက် လွှတ်တော်တွင် အဆိုတင်သွင်း၍ ကြိုးပမ်းမည်ဟု ရခိုင်လူမျိုးအောက်လွှတ်တော် အမတ် ဒေါ် ခင်စောဝေက မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
''အမျိုးသမီးတွေဟာ အခုရှိနေတာထက် ပိုပြီး လုပ်နိုင်ကြပါတယ်၊ ဒီထက် ပိုပြီးတော့ အရည်အချင်းတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရောက်နေတဲ့နေရာတွေ မကောင်းတဲ့အတွက် ပြသခွင့်မရကြတာပါ၊ အမျိုး သမီးတွေရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ဒီထက်တိုးမြှင့်ဖို့လိုပါတယ်''ဟု ဒေါ်ခင်စောဝေကဆိုသည်။
At 1/15/2013 02:29:00 PM No comments:
At 1/15/2013 11:56:00 AM No comments:
At 1/15/2013 09:53:00 AM No comments:
At 1/15/2013 09:39:00 AM No comments:
At 1/15/2013 09:31:00 AM No comments:
At 1/15/2013 09:23:00 AM No comments:
၂ဝ၁၃ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ၊ ၁၄ ရက် နံနက် ၈း၃ဝ နာရီတွင် ရန်ကုန်လေဆိပ်မှ ထွက်ခွာလာခဲ့ကြသော ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသား ၁၆ ဦးသည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ မနီလာလေဆိပ်သို့ ဒေသစံတော်ချိန် ည ၇း ၁၀ နာရီတွင် ဆိုက်ရောက်ခဲ့ကြရာ Centrer Peace and Conflict Studies မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင် ပညာတော် သင်ရောက်ရှိနေကြသော မြန်မာကျောင်းသားများကလေဆိပ်သို့ လာရောက်ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။ ၈၈မျိုး
At 1/15/2013 09:16:00 AM No comments:
At 1/15/2013 09:15:00 AM No comments:
၂၀၁၃ CES မှာ ဝင်ရောက်ပြသသွားတဲ့ Asus ရဲ့  ဈေးသက် သာ ကျောက်သင်ပုန်း ကွန်ပြူတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Operating System
နောက်ဆုံးပေါ် Android Jell Bean ကို အသုံးပြုပါမယ်။ ဆက် လက်ပြီး တော့လည်းဗားရှင်းအသစ်တွေ Upgrade ပြု လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ် ပါတယ်။
At 1/15/2013 08:15:00 AM No comments: